•I-Child and Family Welfare Society icela ukufunsiwa abazali ba-Chantel-Lee Khumalo owazalwa mhlaka 30/06/2012.
Umama wakhe uPretty Khumalo nokusolwa ukuthi usashona kanti ubaba wakhe yena akaziwa.Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uThembi Zondi enombolweni ethi : 033 342 8971.
•Sicela ukufuniswa uNonhlanhla Promise Jila noBoyzee Hadebe abangabazali baka Amahle Olwethu Jila owazalwa mhlaka 30/03/2015.
•Sicela ukufuniswa uSindiswa Primrose Ngcamu no-Adolph Mantumba abangabazali baSwelihle Alain De Paul Ngcamu owazalwa mhlaka 21/01/2013 kanye no-Aphesihle Marcel De Paul Ngcamu owazalwa mhlaka 13/09/2016.Onolwazi sicela athintane noNonhle Dlamini enombolweni ethi : 033 342 8971.
•Sicela ukufunniswa uSizakele Manyoni nongumama kaYoyo Manyoni. Ubaba wakhe yena akaziwa.Onolwazi sicela athintane noFarida Cajee on 033 342 8971.
•Sicela ukufuniswa uMaradona Ngcobo ongubaba kaMinenhle Blose owazalwa mhlaka 14/10/2014.Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uSindi Hlope enombolweni ethi: 033 342 8971.
•Sicela ukufuniswa abazali baka Mkhize Usanda, umama uNonjabulo Mkhize, ubaba akaziwa ungubani. Abase Ezinketheni, onolwazi axhumane nosonhlalakahle uT. Meyiwa kaMbilakhahlela (PMB Service Office) ku 033 392 8600/7
•Sicela ukufuniswa ubaba ka Mshibe Lindokuhle owayaziwa ngoMadlala Sfiso. Kubikwa ukuthi wamshiya esamncane kumama wakhe ongasekho uMshibe Zamathuli Nokwethemba owayesebenza Greytown kodwa ikube lise Wartburg -eMshwathi. Ubaba wengane kuthiwa uzalwa eSwayimane omtholayo sicela athinte usonhlalakahle uNks Nontobeko Dlamini enombolweni ethi : 0335022177.
•I-Child and Family Welfare icela ukufuniswa ubaba noma izihlobo zika-Asanda Goge kanye no-Amanda Goge ababehlala eFrance, onolwazi kucelwa axhumane nosonhlalakahle uNkosinathi Shezi enombolweni ethi :033 342 8971.